Isu tiri mumwe weanozivikanwa mutengesi weAluminium Foil Fiberglass Cloth Tape muChina nesimba remutengo wakanakisa, mhando yepamusoro, kuendesa nekukurumidza uye nebasa rakakwana.
Zvinhu zvedu zvatotumirwa kuAmerica, Europe, Australia, Middle East, nezvimwe.
Aluminium foil ukobvu, tepi upamhi, tepi kureba, nezvimwe zvinogona kugadzirwa.
Zvimwe zvakawanda nezve yedu Aluminium Foil Fiberglass Cloth Tape inorohwa.
Aluminium & Fiberglass yekutsigira jira inopa yakanakisa kuratidza zvinhu kune ese kupisa & mwenje
Yakakwira yakasimba simba.
Yakanaka mhute chipingaidzo nekuda kweyepasi hunyoro hwehutachiona hutachiona hwehuwandu.
Inokodzera kuvhara chisimbiso nekubatana kweHVAC (Heat, Ventilation & AC) masisitimu.
Inoshandiswa mune duct board mubatanidzwa & seams; kujoina & kuvhara mapaipi emabhizimusi & kufambisa nzira.
Girazi faibha jira realuminium pepi rinobvarura nguva dzose, rinogona kudhonzwa. Flame retardant zvigadzirwa, yakakwira tensile simba, kutyora simba, kubvarura kuramba, nyoro substrate, kunama sandara, wakanaka murazvo retardant kuita.
Ine yakasarudzika mhute chipingamupinyi uye yakanyanyisa kukwirira kwemaoko simba uye oxidation kuramba, ine yakasimba kubatana, kurwisa kurwisa uye isina simba acid uye alkali kuramba.
Inokodzera pombi yekuisa chisimbiso kutsemura uye kupisa kupisa uye kupisa kwehutsi hweHVAC pombi uye inotonhora / inopisa mapaipi emvura, kunyanya kuiswa kwepombi muindasitiri yekuvaka ngarava.
Kudzivirirwa kwekudonha kwemhepo, yekukurumidza kugadzirisa murazvo unodzivirira, kudzivirira uye kupindira kwekudzivirira
Unofanirwa here kuziva zvakawanda nezve yedu Aluminium Foil Fiberglass Cloth Tape, ndapota taura nesu pasina kuzengurira. Tine chokwadi chekuti chero chekubvunza kwako chinoita kuti titarise nekukurumidza.
Pashure: Maindasitiri Akaviri-Akatsigira Tepi
Zvadaro: Yakasimbiswa Aluminium Foil Tepi
Kutonhora Insulation Aluminium Foil Tepi
Kupisa Kuchengetedza Aluminium Foil Tepi
Inoratidzira Insulation Aluminium Foil
Imwe-yakatsigira Aluminium Foil Kutarisana, Iyo Inopisa Sei Inogona Aluminium Foil Tepi Tora, Intertape Polymer Boka Aluminium Foil Tepi, Yakapetwa-Yakatsigirwa Yakasimbiswa Aluminium Foil Kutarisana, Aluminium Foil Girazi Yejira Tepi, Tepi,